Hyperledger - DeFi ကိုအဓိကထားတဲ့ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်တခုဖြစ်တယ် Linux မှ
မတ်လ၏ဤပထမနေ့သည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောပွင့်လင်းသောနည်းပညာနယ်ပယ်ပေါ်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ဝေမှုများနှင့်စတင်မည် "DeFi"နှင့်အထူးသအကြောင်း "Hyperledger".
ဟုတ်တယ် "Hyperledger" အများအပြားထဲကတစ်ခုဖြစ်သည် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်အသိုင်းအဝိုင်း ကမောင်းနှင်သည် Linux Foundation, လယ်ပြင်ပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခံရသဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ် "DeFi"ဒါကြောင့် Blockchain နည်းပညာစီမံကိန်းကိုလှည့်ပတ်ကတည်းက (Blockchain) နှင့် ဖြန့်ဝေ Ledger နည်းပညာ (Distributed Ledger Technology / DLT) ။
ခေါင်းစဉ်မ ၀ င်မီ၊ ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည် ဒီ post ကိုဖတ်ရှုခြင်း၏အဆုံးမှာ အောက်ပါစူးစမ်းခြင်းနှင့်ဖတ်ပါ ယခင်ထုတ်ဝေ သင်ချင်လျှင်ခေါင်းစဉ်နှင့်ဆက်စပ်သော နက်ရှိုင်းချဲ့ ယနေ့ခေါင်းစဉ်:
DeFi: «ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဘဏ္Financeာရေး»အတွက်အတိုကောက်။ DeFi ဆိုသည်မှာအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိသူမည်သူမဆို ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ကြားခံမရှိဘဲ blockchain မှကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်ရည်ရွယ်ထားသော DApps (ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းဆိုင်ရာအသုံးချခြင်း) အမျိုးအစားများကိုလွှမ်းခြုံသောအယူအဆနှင့် / သို့မဟုတ်နည်းပညာဖြစ်သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါ" Fuentes.
Blockstack - ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောကွန်ပျူတာပလက်ဖောင်း
Truffle Suite - Blockchain အတွက်ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ကိရိယာများ
1 Hyperledger: စီးပွားရေးအတွက် Blockchain နည်းပညာများ
1.1 Hyperledger ကဘာလဲ?
1.2 Hyperledger Community သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
Hyperledger: စီးပွားရေးအတွက် Blockchain နည်းပညာများ
သင့်ကိုယ်ပိုင်အရ စပိန်ဘာသာဖြင့်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, "Hyperledger" အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်:
"ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်အသိုင်းအဝိုင်းသည်စီးပွားရေးကဏ္ block ရှိ blockchain ဖြေရှင်းချက်များတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်မူဘောင်များ၊ ကိရိယာများနှင့်စာကြည့်တိုက်များအစုတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသည့်နည်းပညာများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အမျိုးမျိုးသောမူဘောင်များအတွက်ကြားနေနေအိမ်ဖြစ်သည့် Hyperledger Fabric, Sawtooth, Indy အပြင် Hyperledger Caliper နှင့် Hyperledger Ursa ကဲ့သို့စာကြည့်တိုက်များကဲ့သို့သောကိရိယာများဖြစ်သည်။"
ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖြည့်စွက်သောစကားလုံးများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြနိုင်သည် "Hyperledger" အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
"Open Source အသိုင်းအဝိုင်းသည် DeFi နယ်ပယ်ကိုအာရုံစိုက်ပြီး Linux Foundation မှ Blockchain နှင့် DLT Technology Project တို့နှင့်အတူတကွလည်ပတ်။ ကြီးမားသောမတူကွဲပြားသည့်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်အတူဤနည်းပညာကိုအသုံးပြုရန်စိတ်ဝင်စားသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များ၏လုံခြုံရေးနှင့်ယုံကြည်မှုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်သည်။" Hyperledger ကဘာလဲ?
Hyperledger Community သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
ဘဏ္leadersာရေးနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အရာ ၀ တ္ထုများ၏အင်တာနက်နှင့်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်နည်းပညာနယ်ပယ်မှခေါင်းဆောင်များ (တစ် ဦး ချင်း၊ အုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကုမ္ပဏီများ) ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးအောင်မြင်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့်လုပ်ဆောင်ရန် "Hyperledger" နည်းပညာနှင့်ဆိုင်သောအုပ်ချုပ်မှုနှင့်ပွင့်လင်းသောပူးပေါင်းမှုအောက်တွင်တည်ဆောက်ပြီးစီမံခန့်ခွဲသည်။ တစ် ဦး ချင်းတီထွင်သူများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ဖြေရှင်းချက်ပံ့ပိုးသူများ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကော်ပိုရိတ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အဆုံးအသုံးပြုသူများသည်ဤစည်းမျဉ်းကိုပြောင်းလဲစေသောနည်းပညာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်မြှင့်တင်ရေးတွင်ပါ ၀ င်ရန်ဖိတ်ကြားခြင်းခံရသည်။ နှင့်ဘဏ္mattersာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ။
ကြိုက်တယ် Linux Foundation, "Hyperledger" စီမံကိန်းများ hosting အတွက် modular ချဉ်းကပ်မှုရှိပါတယ်။ ၏ဖန်လုံအိမ် "Hyperledger" အိမ်များ Blockchain စီမံကိန်းများ ကနေစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဆဲ Hyperledger ဓာတ်ခွဲခန်းများ (အမျိုးအနွယ်) ထုတ်လုပ်မှု (အကျိုးခံစားရရှိရန်) အတွက်အဆင်သင့်တည်ငြိမ်သောကုဒ်အထိ။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်ရန်လူတိုင်းကိုဖိတ်ကြားထားပါသည် DLT စက်မှုလုပ်ငန်း နှင့် စမတ်စာချုပ်များ။
အပေါ်ကပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းအများကြီးရှိတယ် Blockchain နှင့် DLT စီမံကိန်းများ ၏ရပ်ရွာထဲတွင်ဖြစ်ပွားနေသော "Hyperledger"။ နောက်ပိုင်းတွင်ဤပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်နည်းပညာစီမံကိန်းအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာကြမည်။ သို့ရာတွင်၊ လူသိအများဆုံးနှင့်အရေးအပါဆုံးခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကိုဖော်ပြရန်သင့်သည် "Hyperledger အထည်"အောက်ပါအတိုင်းအတိုချုပ်ဖော်ပြနိုင်သည်။
"Hyperledger အထည်အလိပ်သည်စီးပွားရေးအခင်းအကျင်းများတွင်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအရင်းအမြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆင့်ဖြန့်ဖြူးထားသော Ledger နည်းပညာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခြားလူကြိုက်များသောဖြန့်ဝေထားသော ledger သို့မဟုတ် blockchain platforms များနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိကကွဲပြားခြားနားမှုစွမ်းရည်အချို့ရှိသည်။ Fabric သည်ကန့်သတ်ထားသော domain-specific languages ​​(DSL) ထက်ယေဘုယျရည်ရွယ်ချက်ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားများဖြစ်သော Java, Go နှင့် Node.js များတွင်ဖန်တီးထားသောစာချုပ်များကိုထောက်ပံ့ရန်ပထမဆုံးဖြန့်ဝေထားသော ledger ပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကုမ္ပဏီအများစုသည်စမတ်စာချုပ်များချုပ်ဆိုရန်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုများရှိပြီးဘာသာစကားအသစ် (သို့) DSL အသစ်ကိုသင်ယူရန်နောက်ထပ်သင်တန်းများမလိုအပ်ပါ။" Hyperledger အထည်ကဘာလဲ?
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Hyperledger»၎င်းသည် DeFi နယ်ပယ်ကိုအာရုံစိုက်သောပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် Blockchain နှင့် DLT နည်းပညာစီမံကိန်း ကမောင်းနှင်သည် Linux ကိုဖောင်ဒေးရှင်းမှ; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Hyperledger - DeFi ဘုံကိုအာရုံစိုက်ထားတဲ့ open source community
Arduino IDE 2.0 (beta) - ဖွံ့ဖြိုးမှုပတ် ၀ န်းကျင်အသစ်ကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်
Kali Linux 2021.1 သည်အသစ်ပြောင်းခြင်း၊ အသစ်အစီအစဉ်များနှင့်အခြားအရာများပါရှိသည်